Ogaden News Agency (ONA) – Dalka Burundi oo Lagu Dilay Wasiirkii Deegaanka.
Sida ay tibaaxayaan warar laga helay Warbaahinta dalka Burundi, Wasiirka deegaanka oo lagu magacaabo Emmanuel Niyonkuru, ayaa lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Bujumbura, xilli uu u socday gurigiisa.
Ciidanka Nabad-sugida ayaa sheegay in wasiirka la toogtay ka hor kowdii saq dhexe ee habeen hore, mar uu u socday gurigiisa oo ku yaala xaafadda Rohero ee magaalada Bujumbura. Afhayeen u hadlay dawlada ayaa sheegay in dilkan loo xidhay haweeney.
Madaxweynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in la ciqaabi doono ciddii ka dambeysay falkaasi dambiga ah. Mr Niyonkuru ayaa noqonaya wasiirkii ugu horreeyay oo isagoo xil haya ladilo tan iyo markii uu Madaxweyne Pierre Nkurunziza ku dhawaaqay inuu xilka dalkaas u tartamayo mar 3aad, taasi oo dalka galisay qalalaase socday muddo bilooyin ah.
Qiyaas ahaan 500 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo Ciidanka ka tirsan ayaa ladilay halka 300 oo kun oo qof ay isaga qaxeen dalka tan iyo markii uu dalkaasi galay deganaanshiyo la’aanta bishii Abriil ee 2015. Hasayeeshee dalka Burundi ayaa haatan deggan muddo bilooyin ah.